Frezy | Tantsaha anaty aterneto | November 2019
Hazo fotsy hoditra mena: ahoana no handresena ny aretin'ny papango
Ny trondro mason'ny brown dia aretina tsy mitombo avy amin'ny bibikely, fa avy amin'ny fiparitahan'ny fungal. Naseho tamin'ny endriky ny faritra matevina amin'ny voninkazo, pétolienne, moustache ary be mavo mivantana. Fa ny tena azo tsapain-tanana dia ny fako sy ny ravina maitso. Rehefa avy nanamarika ireo famantarana voalohany amin'ity aretina ity ny mpamboly, dia tsy maintsy mandalo haingana araka izay tratra mba hahafahany mamonjy ny voankazo mamy tsara.
Ny karazana varimbazaha malaza indrindra
Good strawberry! Miaraka amin'ny fahafinaretana, dia samy mihinana azy avokoa ny zaza sy ny olon-dehibe. Ny tsiro mangatsiatsiaka toy izany, indraindray amin'ny tsiranoka kely, ankoatra ny fanandramany mahafinaritra, dia tena mahasoa ihany koa - misy vitaminina sy mineraly betsaka, vy, potassium, varahina, magnesium, manganese. Ny lemon dia ambany raha ny votoatin'ny vitamin C.
Fikarakarana ny tany ho an'ny fambolena trongom-bongo Ny fambolena dia mitombo amin'ny toerana iray mandritra ny taona maromaro. Ny fikarakarana ny tany dia mitaky fikarakarana manokana, satria miankina amin'ny fiomanana voalohan'ny fototra ny fiterahana. Voalohany dia mila mifidy tranokala ianao. Tokony ho faritra mitoka-monina, miaraka amin'ny hazavan'ny masoandro. Raha ny marina, noho ny tsy fisian'ny masoandro mangatsiaka, dia hisy fijinjana ratsy amin'ny voankazo.
Ny vary varimbazaha "Gigantella"
Mpiasa zaridaina isan-taona no miezaka manova ny zavamaniry, izay "miaina" ao amin'ny efitranony. Noho izany, ireo olona ireo dia mikatsaka foana ireo karazana vary maro karazana izay afaka hanome vokatra tsara dia tsara, ary koa, vokatra tena tsara. Raha ny an'ny strawberries, ny solontenam-panjakana mendrika indrindra amin'ity karazana ity dia ny karazana "Gigantella".
Ny karazan-tsakay "Albion"
Sarotra ny mahita olona iray izay tsy hanandrana ny akorandriaka eo amin'ny fiainany. Ny anaram-bohitr'ity zava-mamy ity dia ny landihazo zaridaina. Na manao ahoana na manao ahoana ny fahasarotana ny mampitombo io karazana io karazan-kazo io, ny olona isan-taona dia manondraka ireo kirihitra efa misy, na mametraka sokatra vaovao. Ny be mpitia indrindra dia ireo karazany ireo, ny voankazo izay mahatratra ny haben'ny habeny ary manana tsiro lehibe.
Ny karazana varimbazaha "Queen Elizabeth"
Strawberry dia iray amin'ireo sakafo mamy indrindra amin'ny zaza sy ny olon-dehibe. Ny endrik'ireo menaka mena ireo dia maneho ny fiandohan'ny fahavaratra, fialantsasatra ary vakansy. Na dia any amin'ny fivarotana sasany aza io vokatra io dia azo ividianana amin'ny fotoana rehetra isan-taona, ny ankamaroan'ny olona dia mahatakatra fa tsy fambolena izany, fa vokatry ny asan'ny orinasa orinasa.
Ahoana no hambolena ny saham-boankazo eo am-panaovana zavatra
Anatin'ity lahatsoratra ity dia hodinihintsika ny fambolena ny herisetra eo am-pelatanan'ny fitaovana, dia manondro ny lafiny tsara sy ratsy amin'ny fomba fampiasana ity fomba ity, milaza aminao ny fomba hanaovana izany sy ny vidiny. Mianatra ny fomba hampitomboana ny vokatra isika rehefa mampiasa fitaovana fandrakofana. Fantatrao ve? Strawberry no anarana malaza amin'ny zavamaniry sy maitso maitso.
Ahoana ny "Elizabeth 2", ny fitsipika momba ny fambolena sy fikarakarana ny tsaramaso mpanjaka
Tsaramaso be no tian'ny maro. Misy karazana zavamaniry maro, izay samy manana ny toetrany manokana: ny tsirony, ny endriny, ny vokatra. Ny karazana varimbazaha Elizabeth 2 dia tian'ny mpikarakara zaridaina maro, ary noho ny toetra maha-izy azy izany. Fantatrao ve? Ny mpamboly sy ny mpamboly dia manaisotra ny karazana Elizabeth 2 noho ny fisotroan-tsakafo sy ny fitehirizana azy.
Ny karazany malaza indrindra amin'ny trondro maina sy ny trondrobe
Ny saham-boasary dia vokatra mahasoa sy mamy, izay tena tian'ny ankizy sy ny olon-dehibe. Mba hankafizana ny tsirony, dia tsy ilaina intsony ny mandona ny ala amin'ny fitadiavana ny loko miafina, satria ny bebeny dia afaka mitombo ao an-trano. Ny karazam-bozaka malaza indrindra dia ny bezusaya, ny karazana tsara indrindra dia manana karazana karazana ilaina.
Ahoana no hiatrehana ny bibikely malemy?
Raha mieritreritra ianao fa ny zavatra ilaina amin'ny harena ihany no mila arovana, dia tsy izany. Tiantsika rehetra ity ny berry - trondron-dranomamy, fa mba hahatongavana amin'ny tabilao sy ny feony, mila miaro ny trondro avy amin'ny bibikely. Amin'izay dia hanampy antsika hahita izany. Ahoana no hiatrehana ny mitefoka trondro? Iray amin'ireo bibikely mampidi-doza indrindra ny trondro ny homamiadan'ny trondro.
Tsara ny mikarakara ny trongam-bolo taorian'ny fijinjana
Ny zaridaina tsirairay dia maniry ny manondraka akoho matsiro, lehibe sy mamy amin'ny vanim-potoana. Ary izao no fotoana tokony hikarakarana ny fijinjana manaraka avy hatrany aorian'ny fijinjana. Ny fikarakarana ny voankazo mamimamo dia dingana lava, saika ny vanim-potoana rehetra, saingy nahatsapa ny fikarakarana ilay zaridaina, tsy manonofy ny voankazo tsy mamokatra azy amin'ny hariva.
Ahoana no hikarakarana ny trondron-dranomasina mandritra ny voninkazo, ny tanjona tsara indrindra
Fantatry ny olona rehetra ny voankazo mena sy mamy ary maniry antsoina hoe strawberries. Mba hahafahana mijinja vokatra tsara dia mila manome fiahiana avo lenta izy, tsy mandritra ny vanim-potoana mivoatra, fa mandritra ny voninkazo koa. Ny fitsaboana vonjimaika dia ny fitsangatsanganana ara-dalàna, ny famatsiana, ny fanadiovana ny tsimokaretina, ny fikolokoloana be loatra ary ny famenoana ny tany manodidina ny kirihitra.
Ny momba ny fikarakarana trondro maitso amin'ny lohataona: rehefa, inona ary ny fomba hanamboarana ny akoho amin'ny lohataona
Sarotra angamba ny mahita olona tsy te hamoa be, mamy ary mamy - trondron-drongony. Izy ireo dia mamboly fahagagana amin'ny faritra maro samihafa, amin'ny tany samihafa, amin'ny fampiasana teknolojia maro samihafa. Na dia izany aza, vitsy no mahalala izay tokony ho an'ny fofona ho an'ny trondro, natao tamin'ny lohataona.
Masha "Strawberry": ny toetoetry ny karazana sy ny fambolena agrotechnology
Ny voankazo dia mety iray amin'ireo be mpahandro sy be mpitia indrindra amin'ireo mpamboly. Olona maro no te hizara karazana karazan'antoka avo indrindra ao amin'ny tranokalany: beza be, manohitra mafy ny aretina, fikarakarana tsy maotina ary fialana tsara. Amin'ny iray amin'ireo karazana ireo dia hiresaka amin'ity lahatsoratra ity isika.
Ny karazana tsara indrindra amin'ny bebodro
Ny akoho na ny zaridaina saha dia mamy sy mamy, mamy ary malalain'ny olona rehetra hatramin'ny tanora ka hatramin'ny ela. Sarotra ny mihaona amin'ny olona iray izay tsy tia ny akorandriaka amin'ny endrika vaovao na ny tsindrin-tsakafo, ary ho an'ireo izay mitombo ny fambolena ao amin'ny faritra misy azy, dia tian'izy ireo ho lalandava sy hahitam-bokatra. "Gigantella" isan-karazany trondro be dia be, izay niseho tamin'ny ezaka nataon'ny mpamboly holatra.
Ny vary varimbazaha "Tompo": ny toetra tsara sy ny endriky ny fikarakarana
Matetika dia tsy faly amin'ny karazana zaridaina ny mpamboly. Na izany aza, matetika izy ireo no manome tsiny azy noho ny tsy ahazoany ny vokatra tadiavina, satria tsy mikarakara ny akoho izy ireo. Saingy ny karazany tsirairay dia mitaky ny fomba fiasany sy ny fepetra fisamborana sasany. Ary ny "Tompo" anana dia tsy miavaka amin'ireo fitsipika ireo.
Mason-tsivana karazana "Marshal": fambolena sy fiahiana
"Marshal" sariolona dia iray amin'ireo karazana voankazo goavana. Maro ny mpikarakara zaridaina no manintona ny karazana sokatra ho an'ny fambolena, satria azo atao ny manangom-bokatra kokoa sy mora kokoa avy amin'ny kirihitra iray noho ny mihinana amin'ny voankazo kely kokoa amin'ny karazan-kazo. Ny tantaran'ny fifandimbiasana varimbazaha varieties "Marshal" Variety "Marshal" - vokatry ny asan'ny mpamboly Amerikana Marshall Yuell.
Ny tombontsoa sy ny fomba tsara indrindra amin'ny akoho maitso ho an'ny ririnina
Ny Strawberry dia mety amin'ny iray amin'ireo bebiana malala indrindra. Manana tombony maro izy: sokatra, matsiro, mamomamo, manan-karena amin'ny vitamina, singa mikrô ary macro. Ny voninkazo dia manohana ny fiarovana (indrindra ho an'ny ankizy sy ny zokiolona). Misy karazan-tsakafo kely kely mampiavaka azy io ho an'ny sakafo.
Ahoana ny hanomezana strawberries amin'ny fararano
Ny akoho, na ny strawberries - ny voankazo mamy sy mamomamo aloha - tia ny ankizy sy ny olon-dehibe. Ny fiavin'ny lohataona dia andrasana, indrindra fa noho ny fahavokarana hamenoana ity zava-maniry ity. Ankoatry ny fanandramana tsara dia manome tombony lehibe ho an'ny vatan'olombelona ihany koa ny strawberry - loharanon'ny vitaminina rehetra, singa maromaro ary fibre.
Strawberry "Asia": famaritana isan-karazany, fambolena agrotechnology
Ny karazam-bozaka "Azia" dia tsy misy ifandraisany amin'ny faritra lehibe indrindra eran-tany. Nesorina tany Italia tamin'ny taona 2005 izy io. Ny karazany dia tsara dia tsara eny an-tsahanay ary tian'ny tantsaha izany. Ny "Strawberry" Azia dia samy manana tombontsoa sy tombontsoa, ​​ary ato amin'ity lahatsoratra ity dia ahitanao ny famaritana ny karazana vary, sy ny fambolena fambolena ary ny fototry ny fikarakarana azy.
Ny fomba hikarakarana ny trondron-dranomasina amin'ny lohataona: toro-hevitra avy amin'ny mpamboly za-draharaha
Ny saham-boankazo dia iray amin'ireo lafo indrindra izay iriantsika foana eo amin'ny tabilao. Ny fiaraha-mikorana dia mila mampihatra ny sasantsasany amin'ny fikarakarana ny fambolena mandritra ny vanim-potoana, dia azo antoka ny fiarovana ny kirihitra sy ny vokatra. Fantatrao ve? Ny trondro dia zava-mahasoa tena ilaina. Manana vitaminina C, E, P, salicylic, oxalic, folic acid, carotene, potassium, calcium, fluorine, vy, silikana, varahina, magnesium, zinc, yoda, chromium.
Ireo toro-làlana ambony momba ny fikarakarana sy fambolena karazam-bibikely "Otradnenskaya"
Ny zavamaniry atsimo atsinanan'i Eonium: ny karazany, ny fananana medikaly ary ny fikarakarana azy
Ny salady salady mahavelona indrindra: karazan-tsakafo tsotra miaraka amin'ny sary
Nasturtium - loharano vitaminina sy fambolena zaridaina
Crassula ho an'ny fambolena
Ny kôkômère mahasoa (vao) ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy
Tsiambaratelon'ny fambolena "Malvina" ao amin'ny tranokalanao
Nahoana ny fofom-bika no manaloka: mivoaka avy amin'ny vehivavy, avy amin'ny vava, avy amin'ny hatsembohana, vatana na fanasitranana? Mampidi-doza ve izany ary ahoana no hadio?
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Frezy